“ITM 2018” : fanoitra ho an’ny fizahantany | NewsMada
“ITM 2018” : fanoitra ho an’ny fizahantany
Hatao ny 31 mey hatramin’ny 3 jona 2018 ho avy izao ny hetsika iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany eto Madagasikara (ITM), andiany fahafito eny amin’ny Tanàna Voara Andohatapenaka. Manodidina ny 50 ny mpandray anjara, hahitana ireo avy atsy amin’ny Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indianina, antsoina koa hoe Nosy Lavanila sy avy any amin’ny firenen-kafa. Tanjona ny hanomezan-danja ny fizahantany maharitra aty amin’ny ranomasimbe Indianina, mifantoka amin’ny zahavoahary.
Anisan’ny ho hita mandritra ireo fotoana ireo ny fifanakalozana traikefa sy vaovao eo amin’ny samy mpandraharaha eto an-toerana sy vahiny amin’ny lafiny fizahantany sy ny mifandraika aminy. Ahitana toerana manokana ho an’ny fialamboly amin’ny fizahantany (rafting, quad, kayak, parapente, …) ny fitaovana ilaina amin’izany. Hanana tranoheva koa ireo ofisim-paritry ny fizahantany avy any amin’ny faritra 22.
Fotoana hikarohana lalam-barotra, fiaraha-miombon’antoka ny “ITM”, hanitarana ny seha-piharian’ny matihanina. Manodidina ny 50 ny loabary an-dasy harahina adihevitra. Maherin’ny 200 ny tranoheva, manodidina ny 15.000 ny mpitsidika handrasana. Manohana ny ONTM amin’ny fikarakarana ny Fiombonan’ny Antenimieran’ny varotra aty amin’ny ranomasimbe indianina (UCCIOI).